SpiceJet ibido njem ụgbọ elu Amsterdam-Bengaluru
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » SpiceJet ibido njem ụgbọ elu Amsterdam-Bengaluru
Airlines • Na-agbasa News Travel • India na -agbasa ozi ọma • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
-Gbọ elu dị ọnụ ala SpiceJet mara ọkwa na ọ ga-amalite ọrụ ogologo oge na-ejikọ Amsterdam na Netherlands na Bengaluru na India.
Linegbọ elu ahụ natara ikike General Directorate maka Development Cooperation n'izu gara aga iji gbaga Europe na United States of America.
N'oge na-adịbeghị anya SpiceJet tinyere ụgbọ elu B737- MAX 8 n'ụgbọ mmiri ya. Linegbọ elu ahụ na-arụ ụgbọ mmiri Boeing na Q-400s. Ọgbọ ọhụụ Boeing 737-700s, 737-800s, na 737-900ER nwere nku iji nye ohere maka nchekwa, nkasi obi na ịrụ ọrụ nke ọma maka ụgbọ elu dị mkpụmkpụ ma ọ bụ ọkara, ebe emebere Q400 maka ụzọ dị mkpirikpi.
Isi ụlọ ọrụ SpiceJet dị na Gurgaon, Haryana. Ugbu a ọ na-arụ ọrụ ụgbọ elu 630 kwa ụbọchị gaa ebe 64, gụnyere 54 India na 15 mba ụwa na-aga site na hubs ya na Delhi na Hyderabad.
Thegbọ elu ahụ malitere ọrụ na Machị 1984 mgbe ụlọ ọrụ ndị India na-emepụta ihe bụ SK Modi guzobere ụlọ ọrụ ahụ iji nye ndị ọrụ tagzi nke ikuku. Ekem, ke February 17, 1993, aha ụlọ ọrụ ahụ dị ka MG Express wee banye na mmekorita ọrụ aka na onye ọrụ ọkọlọtọ German bụ Lufthansa. Thegbọ elu ahụ nyere ndị njem na ndị ọrụ ibu n'okpuru aha Modiluft.
N’afọ 2004, onye ọchụnta ego India bụ Ajay Singh nwetara ụlọ ọrụ ahụ ma mekwaa baptizim dịka SpiceJet. Airgbọ elu ahụ rụrụ ụgbọ elu mbụ ya na Mee 2005. Baron mgbasa ozi India bụ Kalanidhi Maran nwetara osisi na-achịkwa SpiceJet na June 2010 site na Sun Group nke e rere azụ na Ajay Singh na Jenụwarị 2015. airgbọ elu ahụ na-arụ ụgbọ mmiri Boeing 737 na Bombardier Dash 8 ugbo elu.
Agba nke 5 nke Mission Vande Bharat ga-ebido n'otu ụbọchị nke August 1, na-arụ ọrụ iji mee ka ụmụ amaala tọrọ atọ n'ihi COVID-19 laghachi n'ụlọ na India. Vande Bharat Mission na-ekpughere na nkebi na ụgbọ elu na-aga USA, Germany (Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt), na France (Charles de Gaulle Airport) ka enyere ha ikike ịweghachi ọtụtụ ụmụ amaala India nọ ogologo oge.